umkhakha ukuKhanya kwezwe lonke wemboni komnotho womhlaba, okuyinto abahileleke ngokuqondile kumiswa amabhajethi kazwelonke emazweni amaningi. Sihlanganisa inqwaba imikhakha kanye ye-mikhakha, phakathi kwabo bungabonakala enjalo ukhiye: izingubo, izicathulo, zendwangu. Kuyinto lezi zindawo wathola ukuthuthukiswa oqinile, ukuthula kanye umkhakha ngeke akwenze ngaphandle imikhiqizo yabo.
UkuKhanya umkhakha izwe emnothweni wanamuhla wembulunga yonke, akukho okushintshile yokuhlala. Angithi amazwe athuthukile kufanele lemiqulu emikhulu ukukhiqizwa ukukhanya imikhiqizo umkhakha ikakhulukazi lezi zigaba ezintathu. Okwamanje, lolu hlobo umkhakha wemboni wathola umfutho omkhulu nokuthuthukiswa emazweni asathuthuka. Kule ndaba, Emazweni amaningi athuthukile baye banquma ukungayisebenzisi nhlobo ancintisane imikhiqizo eshibhile kule ingxenye emakethe, futhi ukugxila ukukhiqizwa yayo ngokuqondene nempikiswano izimpahla ezibizayo uphawu. Isibonelo esimangalisayo lokhu kungaba umkhakha ingubo, kwazise abantu abaningi abaklami abadumile European imfashini abaklami ukuthi amavolumu elincane ukukhiqizwa Nokho, inzuzo onohlonze kungenxa wedwa izimpahla.
Cabanga ukukhanya izimboni eziyisisekelo.
Textile ukukhanya umkhakha zomhlaba emashumini eminyaka amuva ishintshile kakhulu. Isizathu esikhulu salokhu kwaba intuthuko kwezobuchwepheshe, owenzeka ngo-engxenyeni leminyaka elidlule yesibili. Uma phambi kwalo lonke yendwangu ngokuyinhloko ekwenzeni izimpahla ukotini kanye izindwangu, kanye ingxenye encane elalihlala izinto ezifana uvolo, nelineni, rayon. Ngaleso sikhathi samanje, lokhu umkhakha kwelulwe kakhulu uhla yayo ngenxa ukusetshenziswa kakhulu ahlukahlukene zokwenziwa nendwangu (chemical) fibre izinto. Basembonini yendwangu emhlabeni wonke uyakhula ngesivinini Amazing lula. Kuze kube manje, esifundeni esikhulu, okuyinto kuthatha 70% umthamo isamba izindwangu, kuyinto Asia. Futhi uma sicabanga basembonini yendwangu ngokombono isigaba kwezimpahla kanye nemikhiqizo, singakwazi ngokuphepha kuqashelwe ukuthi amazwe ase-Asia ukunikezela ukuze eziphethe imakethe yomhlaba wonke futhi 50% uboya ukotini izindwangu. Abakhiqizi ngobukhulu ekukhiqizweni izindwangu ukotini kubhekwe China (abahambisele kuze 30%), India (cishe 10%), i-United States, i-Taiwan, Japan, Indonesia. Ukuze izindwangu kusengutsheni yoboya isimo cishe efanayo. share China kule ingxenye 15%, ngemuva kokuthi uya Italy ne-14%, Japan, USA, Turkey neNdiya, futhi uhlu oluphelele ezimbalwa emazweni Western Europe. Kodwa imboni yasekhaya, naphezu kwezinkinga elalibhekene ingxenye enkulu ekukhiqizeni ngezinto zemvelo zokusetshenziswa for izindwangu, libuye libe wukwehla zokukhiqiza, kanye okwamanje akukwazi ezincintisana izimpahla amazwe ngaphandle ekhethekile ukuthuthukiswa Uhlelo isimo nokusekela. Kodwa ngenkathi inkinga ezingeni wombuso ikakhulukazi akekho ekhathaza.
Ngemuva ke, kufanele kuqashelwe textile kanye izingubo umkhakha. Ukuthunga ukukhanya umkhakha zomhlaba ukwenza ngaphandle ukukhiqizwa izingubo nelineni, futhi ezihlukahlukene neminye imikhiqizo. Isithombe kulomkhakha okucutshungulwayo yendwangu nsé. Oholela abathuthi imikhiqizo enjalo emhlabeni kukhona China, South Korea, India, Colombia, Taiwan. Futhi amazwe asethuthukile futhi njengoba sekushiwo ngenhla, ngokukhethekile kuphela izinto eziningi ezincane elite, imikhiqizo imfashini kanye ngabanye.
Shoe ukukhanya umkhakha e emnothweni wezwe maqondana odlule futhi lonke Izigayo ezimbonini kakhulu abasale dengwane kule esafufusa. Lokhu kungenxa yokungabikho yezabasebenzi eshibhile wezisebenzi kula mazwe. Oholela isikhundla kwembulunga izinqolobane China. Kulinganiselwa zamanje imikhiqizo China sika-akhawunti 40% wemakethe umthengi emhlabeni.
Ngakho-ke, lapho ifingqa kungashiwo ukuthi eminyakeni yamuva maphakathi umkhakha ukukhanya embulungeni yonke uye sigudluke kakhulu iNtshonalanga Yurophu ne-United States, e-Asia Mills.
Isikhundla ezindawo ka the Ural base Metallurgical. Ural base Metallurgical: isici
Carb "Solex 21073" ukuze "Niva": idivayisi, ukulungisa, ukulungiswa, ukubuyekezwa
Wallpaper for ephasishi - ukuhlukahluka kanye nokusebenza.